Manchester United, iyo Real Madrid oo loo gacan galiyay Fursad ay ku heli karaan Erling Braut Haaland | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Manchester United, iyo Real Madrid oo loo gacan galiyay Fursad ay ku...
Manchester United, iyo Real Madrid oo loo gacan galiyay Fursad ay ku heli karaan Erling Braut Haaland
Madaxa Inter Milan Beppe Marotta ayaa u gacan geliyay kooxaha Manchester United iyo Real Madrid baacsiga ay ugu jiraan saxiixa weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland .
21 jirkaan ayaa weli ah mid ka mid ah xidigaha ugu shidan suuqa, waxaana la filayaa in dagaal xooggan oo adeegiisa ah uu bilaaban doono marka qandaraaskiisa lagu burburin karo 68 milyan ginni xagaaga soo aadan.
Man United iyo Real Madrid ayaa loo malaynayaa inay yihiin labada ugu cadcad saxiixa Haaland, agaasimaha Inter Marotta ayaa hadda qirtay in weeraryahanku “gabi ahaanba” uusan ku ekaan doonin Serie A.
Isagoo la hadlaya La Gazzetta dello Sport , Marotta ayaa yiri: “Mid ka mid ah qoomamadayda ugu weyn waxay ahayd heshiiskii Haaland, waxaan ahaa agaasimaha guud ee Juventus waxaan fursad u helnay inaan kula soo saxiixno 2 million.
“Waan ku dhawaanay, hadda macquul ma ahan inaan aragno Haaland oo ka ciyaaraya Serie A. Kooxaha Talyaaniga gabi ahaanba fursad uma lahan inay la saxiixdaan xagaaga soo aadan.”
Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa inay u dhaqaaqdo Haaland iyagoo isku diyaarinaya nolosha la’aanta Kylian Mbappe , kaasoo u muuqda inuu ka tagi doono si xor ah dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Previous articleLiverpool oo ku biirtay tartanka loogu jiro Xidiga Ousmane Dembele
Next articleManchester United oo isku diyaarinaysa inay Liverpool kula tartanto Gavi